studio ebomvu kunye neenkuni kunye nesidlo sakusasa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSeverine
Isitudiyo esihlaziyiweyo entliziyweni yendawo yokuhlala ezolileyo kumbindi wesixeko sasePaimpol kwaye ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuya kwisiqithi saseBréhat. ibekwe kumgama oziimitha ezingama-300 ukusuka kwizibuko kunye neziko lembali. icinema kunye nethala leencwadi leendaba zikufuphi kunye neevenkile ezininzi (leclerc).
Iindawo zokutyela ezininzi ziyafumaneka kumgama wokuhamba weflethi.
istudiyo senziwe ngekhitshi kunye nobuncinci besitya, i-hob yombane kunye ne-microwave, i-toaster; igumbi lokuhlala kunye ne-BZ (click-clack) yokulala, i-240 * 220 i-duvet kunye ne-2 pillows, i-TV, i-wifi yamahhala, itafile yebha kunye nomenzi wekhofi; igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki, isepha, isomisi seenwele kunye nendlu yangasese.
Uya kufumana amashiti, iitawuli kunye netawuli yeti ekhoyo.
4.60 ·Izimvo eziyi-148
4.60 out of 5 stars from 148 reviews
4.60 · Izimvo eziyi-148
istudiyo sifumaneka kufutshane nezitrato zabahamba ngeenyawo kunye nechweba lasepaimpol. Ifumaneka kwi-rue de l'hôtel de ville kwaye ngokuchasene necawa enkulu yasePaimpol. Indawo yokutyela encinci entle "iti yejasmine" ixabiso elihle lemali okanye "i-terre neuvas" kwizibuko. Indawo yokutyela ye-chic ngakumbi kunye ne-gourmet: "la marne". kwi-aperitif kwi-port, dibana "ngexesha" ... kwaye ugqibe ngokuhlwa "kwi-corto maltes".
Kufuphi ne-cinema kunye nethala leencwadi leendaba.
Ukuthenga, i-5 min ukuhamba ukusuka kwivenkile yeLeclerc.
Umbuki zindwendwe ngu- Severine
Ndizama kangangoko ndinako ukukwamkela ngokobuqu. Umama wam uNadine kunye neqabane lam uFrédéric nabo bandinceda ukuba ndamkele iindwendwe zethu ngeyona ndlela ibalaseleyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Paimpol